Ireo bitsika 10 tadiavin'ny mpampiasa Apple Watch | Vaovao IPhone
Ny Apple Watch sy izay rehetra misy ifandraisany amin'izany paoma fiambenana izy ireo dia niditra an-tsokosoko tamin'ny rakotra antsika androany eny, ary ny andro koa. Ny marina dia io no fitaovana lamaody, ary Cupertino tsy misalasala vetivety hametraka azy eo alohaloha. Na izany aza, ankoatry ny sary an-tsain'i Cupertino amin'ny famatrehany, ny mpampiasa dia maniry ihany koa ny hanararaotra izany amin'ny alàlan'ny fanaingoana sy ny fomban-javatra izay voarara, na voasaron'ny fahasoavan'ny paoma. Izahay dia manondro mazava ho azy ireo bitsika izay tian'ny mpanjifa indrindra afaka manararaotra azy ireo amin'ny finday.
Hatreto, tsy vitanao jailbreak ny Apple Watch anaoSaingy maro ireo mpamorona efa miasa am-pahavitrihana an'io, ary mety tsy ho ela akory dia ho hitantsika fa lasa tena izy io fampiasa io. Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy manonofy isika, ary amin'ny fotoana manonofinofy dia mieritreritra ny hanao izany amin'ilay lisitr'ireo fanovana tena irina vantany vao misy ny fametrahana azy ireo ao amin'ny smartwatch an'ny orinasa. Sahy ve ianao manamarika sao tsy gaga tampoka rehefa tonga aho?
1 Top 10 tweaks tadiavina indrindra amin'ny Apple Watch
1.1 Fonenana manokana
1.2 Fampiharana zanatany
1.3 Ovao ny efijery
1.4 Lohahevitra mahazatra
1.5 Alefaso ny hetsika Activator avy amin'ny Apple Watch
1.6 Mitsitsia bateria
1.7 Fanamboarana ny motera Taptic Engine
1.8 Ataovy miavaka ny fahasarotana
1.9 Mizaha ny tranonkala
1.10 Play audio mivantana
Top 10 tweaks tadiavina indrindra amin'ny Apple Watch
Manana vitsivitsy toy ny fenitra isika, fa raha ny amin'ny fanamboarana gadget, kely ny zavatra rehetra. Izany no antony isan'ny fihamboan'ny mpankafy indrindra, iray amin'ireo fikajiana mety hahitana fahombiazana betsaka indrindra dia ilay mamela antsika hampitombo azy ireo. Hanatevin-daharana an'ity iray ity ve ianao?
Na dia efa misy aza ny sasany fampiharana natao ho an'ny Apple WatchNy sasany mampiasa tsotra izao ny iPhone ho mpiorina voalohany. Midika izany fa ambany ny hafainganam-pandeha, ambany fampisehoana ary mihinana bateria avo kokoa. Raha misy ny tweak nanamora ny raharaha dia azo antoka fa ho sambatra kokoa ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Ovao ny efijery
Mandeha ho azy ny fotoan'ny pikantsary, ary rehefa tsy manatsara ny fahombiazan'ny bateria dia mahita olana vitsivitsy isika izay mety hanasarotra ny fifandraisana amin'ny Apple Watch. Ary satria toa ity no iray amin'ireo zavatra tsy hiova amin'i Apple, ny tweak no mety indrindra hananana azy rehetra.
Ny lohahevitra namboarina dia efa miasa tsara amin'ny iPhone, ary amin'ny tranga Apple Watch dia tsy ho afa-miavaka amin'izany izy ireo tweaks izao tontolo izao.
Alefaso ny hetsika Activator avy amin'ny Apple Watch
Ny fanaovana automatique ny zava-drehetra dia mety ho tena mahafinaritra, fa ambonin'izany rehetra izany, manomboka amin'ny tanana miaraka amin'ny Apple Watch dia mety ho lasa zavatra tena miasa tokoa izy io.
Tweaks izay mamela hanatsara ny fahafahan'ny Apple Watch dia ho raisina tsara, indrindra raha mahavita izy ireo mampitombo ny fizakan-tena izay efa maro ny mpampiasa no mitaraina.
Fanamboarana ny motera Taptic Engine
Ny fikasihan-tanana amin'ny fomba hafa dia mamela anao hanao zavatra maro. Saingy angamba tsy dia betsaka araka izay tadiavinay. Ka raha afaka namaky ny tranomaizina isika dia tsy isalasalana fa izany dia iray amin'ireo safidy voalohany hangataka ao anatin'ireo fanovana ireo.
Ataovy miavaka ny fahasarotana
Ireo entana madinidinika izay manome anao fampahalalana bebe kokoa ary hitantsika amin'ny efijery Apple Watch dia mety hisy dikany bebe kokoa raha azonao atao ny manamboatra azy ireo araka ny itiavanao azy, sa tsy izany?
Mizaha ny tranonkala
Na dia hatraiza hatraiza aza i Safari, tsy ao amin'ny Apple Watch io. Ny antony ny fisehoana kely sy ny tsy mety dia mety ho matanjaka, fa ny sasany te-hivezivezy avy amin'ny famantaranandro.
Play audio mivantana
Mety ho iray amin'ireo fiasa ireo izay maro no maniry hanana eny na eny amin'ny fiambenany. Ary ny tena marina dia ny tweak iray no hitondra azy ireo any amin'ny tanany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Ireo bitsika 10 tadiavina indrindra tadiavin'ny mpisera Apple Watch
Ny hadalana momba izay tena ao anatiny ny hadalan'ny gadget iray izay tsy mijanona ho famantaranandro ary amin'ny fotoana hahatongavan'ity hadalana ity dia efa naka ny taranaka faharoa izy ireo hijery raha maka sary iray hametahana ireo sary amin'ny famantaranandro izy ireo .